ebook reader – MrDBA Blog
Tag: ebook reader
Posted in eBook Reader, ကြော်ငြာ - December 9, 2010 - 35 Comments
ခရစ္စမတ်ရက်လဲ နီးလာပြီဆိုတော့ သူများတွေကလဲ Wish Lists တွေလုပ်လာကြပါတယ်။ ငယ်⁠ငယ်ကတည်းက ကနေ့အထိ တစ်ခါမှ အပြင်မှာ လူချင်းမဆုံဘူးတဲ့ ခရစ္စမတ်ဘိုး⁠ဘိုးကလဲ ဒီနှစ်ကိုယ့်ဆီလာမှာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဘာသာဘဲ ဘိုး⁠ဘိုးဝတ်စုံဝတ်ပြီး လက်ဆောင်ပြန်ပေးဖို့ စိတ်ကူးရပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ eBook တွေမှ ဖတ်ရမယ်ဆိုလျှင် iPod Touch လေးနဲ့ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း iPod Touch ဆိုတာက screen သေး⁠သေးလေးဆိုတော့ ဖတ်ရတာ အားရလှတယ်လို့တော့ မဟုတ်လှပါဘူး။ သူများတွေ Kindle တွေဝယ်သုံးကြတာတော့တွေ့မိသား၊ ရထားပေါ်မယ်၊ ကားပေါ်မယ် သို့သော်လည်း အဲလောက် ဇွဲနဘဲကြီးကြီးနဲ့ ဖတ်မှာလားလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်⁠ပြန်မေးမိတော့လဲ အဖြေသေချာ မတွေ့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် iPad ထွက်လာပြန်တော့လဲ ဈေးနှုန်းကြီးလှတာကြောင့်ရယ် eBook ဖတ်မယ်ဆိုရုံနဲ့တော့ iPad မဝယ်ပါနဲ့လို့ အကြံပေးကြတာကြောင့် အသာလေး နေနိုင်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောဖူးပါတယ်၊ ငါတို့ဟာ ပိုက်ဆံငတ်နေတဲ့ လူတွေတဲ့။ သူဆိုလိုချင်တာက အစားအသောက် ငတ်ပြတ်နေတဲ့လူဟာ စားစရာသောက်စရာ တွေ့ရင် အငမ်းမရစားချင်သလိုဘဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ ငွေငတ်နေတဲ့လူတွေမို့့ အခုလို နိုင်ငံခြားမှာ ငွေလွယ်⁠လွယ်ရှာလို့ရနေတော့ ဟိုဟာဝယ်ချင် ဒီဟာဝယ်ချင် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။
နိဒါန်းချီနေတာ တော်တော်များသွားပြီ။ ပြောချင်တာကတော့ eBook Reader တွေကို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေ⁠နေရင်းက တနေ့တော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က eBook Reader တစ်မျိုးအကြောင်း စကားစလာပါတယ်။ သူတော့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဝယ်တော့မယ်တဲ့။ စာအုပ်လဲ ဖတ်လို့ရတယ်၊ အရောင်အသွေးကလေးလဲ စို⁠စိုပြည်ပြည် ကြည့်လို့ရတယ်၊ အင်တာနက်လဲ ချိတ်လို့ရတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေ အမြဲနေတဲ့ Facebook ဆိုတာနဲ့လဲ ချိတ်ဆက်ထားတယ် ဆိုတာတွေကြောင့် ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ဆိုရင် မဆိုးဘူး တန်တယ်လို့ ပြောလာတာကြောင့် နဲ⁠နဲပါးပါး လေ့လာတီးခေါက်ကြည့်တဲ့အခါ။
BARNES & NOBLE ကထုတ်တဲ့ Nook Color ဆိုတဲ့ eBook Reader လေးပါ။
Video မိတ်ဆက် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ကားထဲကြည့်ရတာ စိတ်မဝင်စားသေးဘူးဆိုလျှင် နောက်တစ်ကား ထပ်ကြည့်ပါ။
သိပ်မဆွဲဆောင်သေးဘူးဆိုလျှင် ထပ်ကြည့်ပါဦး။ ဒါလေးကတော့ eBook Reader တင်မက Game ပါဆော့လို့ရတယ်လို့ ပြောလိုတာပါ။ (လက်ပုတို⁠တိုဖြစ်နေတာလေးတော့ သည်းခံပေးကြပါ။) နောက်ဆုံး Video ကတော့ Rooted လုပ်ထားတဲ့ version လို့ပြောကြတာပဲခင်ဗျ။ ကြည့်ရတာ Root လုပ်ပြီးမှ Application တွေ အလကားသုံးလို့ရမယ် ထင်တယ်။ မဝယ်ခင်ကထဲက ဖျက်ဖို့စဉ်းစားနေပြီ။
စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလျှင်တော့ ဈေးက USD249 နဲ့ရောင်းပေးပါတယ်။ စင်ကာပူကနေ မှာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ vPost ကိုသုံးပြီး မှာယူလို့ရပါတယ်။ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ဆိုလျှင်တော့ iPad ကိုမလှမ်းနိုင်တဲ့၊ အဲဒီလောက် မလိုပဲနဲ့ အရောင်အသွေးစို⁠စိုလေးနဲ့ စာဖတ်နိုင်မယ်၊ Tablet တစ်လုံးလိုသုံးနိုင်မယ် ဖြစ်ပါတယ်။ eInk သုံးထားတာ မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ ပြင်ပအလင်းမှာ ရောင်ပြန်တာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူလဲအတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားထားတယ်ဆိုတာကို ဒီလိုရေးထားတာကို ကြည့်ပြီး နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Stunning7inch VividView™ Color Touchscreen shows more than 16 million colors on the best-in-class IPS** display.
Incredibly clear, sharp text and images from an unsurpassed high resolution display at 1024 x 600 delivering 169 pixels per inch (PPI).
Reduced glare and optimum brightness for reading indoors or outside.
အသေးစိတ်ကို သူ့ Web Site က Specification မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုနိုင်မယ့် File Extension များကတော့
EPUB (including Non or Adobe DRM)
Other documents: XLS, DOC, PPT, PPS, TXT, DOCM, XLSM, PPTM, PPSX, PPSM, DOCX, XLX, PPTX
Graphics: JPG, GIF, PNG, BMP
Kindle ကိုကျော်တက်သွားမှာလား ဘာလားဆိုတော့ အဲလိုလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ Kindle ကတော့ စာဖတ်ဖို့သက်သက် ပြုလုပ်ထားတာပါ။ အားတစ်ခါသွင်းထားလျှင် အကြာကြီးခံပါတယ်၊ Nook Color ကတော့ wi-fi ပိတ်ထားလျှင် ၈နာရီကြာ သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ Kindle ကတော့ Memory ထပ်တိုးလို့ မရတော့ပေမယ့် Nook Color ကတော့ 32GB (MicroSD) အထိ တိုးချဲ့လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ အချုပ်ဆိုရလျှင်တော့ Knidle လို ရိုး⁠ရိုးအေးအေးကြီးကိုလဲ မကြိုက်၊ iPad လို Celebrity ကြွကြွရွရွလေးနားလဲ မကပ်နိုင်ဖြစ်နေသူများအတွက် Nook Color လေးက ပစ္စည်းကောင်း ဈေးသင့် ကိုယ်နဲ့လည်း အလွမ်းသင့်လောက်တယ်ဆိုတာလေး လေ့လာမိသလောက် ဖောက်သယ်ချလိုက်ရပါတယ်။
Kindle အကြောင်း ဖတ်ရန်။ (1) | (2)
Tags : ebook reader, nook color